कोरोना संक्रमित अस्पतालको शौचालयमा मृत भेटिए - JanaSanchar.com
कोरोना संक्रमित अस्पतालको शौचालयमा मृत भेटिए
रुपन्देहीको भैरहवास्थित भीम अस्पतालको आइसोलेसनमा प्लाज्मा चढाइ उपचार गरिरहेका एक संक्रमित शौचालयमा मृत भेटिएको खबर छ।
कोरोना संक्रमणपछि चार दिनसम्म होम आइसोलेसनमा बसेका तिलोत्तमा ४ विष्णुपुराका ५८ वर्षका मेघराज ज्ञवाली अस्पतालकै शौचालयमा मृत भेटिएका हुन्।
पारिवारिक श्रोतका अनुसार, मुटु रोगको औषधी खाइरहेका ज्ञवालीलाई २९ गते राति करिब १० बजेदेखि प्लाज्मा चढाइएका थियो। उनको अवस्था जटिल हुने ठानेर परिवारले काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि उनीहरूले हेलिकप्टरसमेत चार्टर्ड गरिसकेका थिए। तर उनको कात्तिक ३० गते विहान मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ।
मृतकका आफन्तले मृत्यु भएको चार दिनपछि अस्पतालको लापरवाहीले विरामीको ज्यान गएको आरोप लगाएका छन् । अस्पतालका चिकित्सक डा. आरिस हुसेनले भने लापरवाही नभएको दावी गरे । ढोका लगाएर शौच गर्दा अक्सिजनको मात्रा कम भएर विरामीको ज्यान गएको डा. हुसेनले बताए ।
‘अस्पतालको सहयोगीले शौचालय लैजान खोजेपनि विरामीले एक्लै जान्छु भन्नुभएको रहेछ’ उनले भने, ‘शौचालयको ढोकाको चुक्कल नलगाई हावा छिर्ने ठाउँ थोरै राखेको भए ज्यान नजान सक्थ्यो ।’
डा. हुसेनले अस्पताललाई बद्नाम गर्ने र संक्रमितको उपचारमा दिन रात खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने उद्देश्यले पनि लापरवाहीको आरोप लगाउने गरिएको बताए ।
संक्रमित विरामीले बिहान ३ बजेसम्म परिवारका सदस्यसंंग फेसबुक म्यासेन्जरमा कुरा गर्दै आफ्नो स्वास्थ्य ठिकै रहेको बताएका तर बिहान ७ बजेतिर अस्पतालले बिरामीको मृत्यु भएको जानकारी गराएको मृतकका आफन्त अर्जुन पौडेलले बताए ।
मृतकका आफन्तले संक्रमित बिरामी शौचालयमा झण्डै दुई घण्टा समय बस्दा पनि अस्पतालले थाहा नपाउनु गम्भीर लापरवाही भएको आरोप लगाएका छन् । उनले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए । तर अस्पतालका डाक्टरले भने बढीमा २० मिनेट शौचालयमा रहेको दावी गरे ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको (२०७७ मंसिर ४, बिहीबार) 2020-11-19 256 Viewed